ကျွန်တော်နဲ့ခရီးသွားပုံပြင်များ – Grab Love Story
ညအိပ်ပုံပြင်လေးအဖြစ်ြေ့ာပြချင်သည်။ကျွှန်တော်.အသက်17နှစ်ကနေယနေ.အသက်30ကြားခရီးသွားပုံပြင်လေးတွေကိုစာစုတခုပြောပြချင်သည်။ကျွှန်တော်တို.အသက်17နှစ်အရွှယ်လောက်မှာပထမဆုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ.ခရီးစသွားဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ကျွှန်တော်ကရှမ်းပြည်တောင်တန်းကြီးပေါ်ကမြို.လေးတမြို.မှာနေထိုင်သောတိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်သည်။ကျွှန်တော်တို.10တန်းစာမေးပွဲတွေဖြေပြီးချိန် သူငယ်ချင်းတွေနဲ.ခရီးစတင်ထွက်ခဲ.ကြသည်။ကျွှန်တော်တို.သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာမိန်းကလေးသူငယ်ချင်း 6ယောက်–ယောက်ျားလေး8ယောက်ပါသည်။ကျွှန်တော်တို.စုစုပေါင်းဆယ်.လေးယောက်
ခရီးပင်ပန်းတာကြောင်.ကျွှန်တော်အိပ်ြေ့ပာသွားတာ–ကိုကြီးတို.နေ.လည်ထမင်းစားချိန်မှကျွှန်တော.ကိုလာနိူးလို.တော်တော်အိပ်ပျောသွားမှန်းသိလိုက်သည်။မျက်နှာသစ်ရေချိူးပြိးနေ.လည်စာစားပြီအခန်းထဲမှာလျှောက်ကြည်.နေမိသည်။ဖူးစာအုပ်တွေ–ခွေတွေ–ဓာတ်ပုံတွေအထပ်လိုက်ဟိဟိ–တယောက်ထဲကြည်.ပြီး–လီးလေးကိုတောင်လို.ကျွှန်တော်.မှာအခန်းထဲကထွက်တောင်မထွက်တော.ဘူးဗျာ။ညနေကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်တော.–လာထမင်းသွားစားမယ်–တာရာလေး–ဘယ်လိုလဲ–ကွ–လောကစည်းစိမ် ဒီအခန်းမှာအကုန်တွေ.နေတာလားညီလေးရ–ဒါကနမူနာပဲရှိသေးတယ်နော်–အစစ်မှန်တွေ–ညကျရင်လာတော.မယ် လာထမင်းသွားစားမယ်”ကိုဟိုက်ကြီးခေါ်ဆောင်လာနောက်လိုက်သွားတော.သည်။ည7း00နာရီလောက်တော.လာရွှာထဲသွားမယ်ဆိုပြီးအားလုံးသွားကျသည်–ကျွှန်တော်လဲလိုက်သွားလိုက်သည်။
နောက်နေ.မနက်ရောက်တော. ကိုဟိုက်ကြီးနဲ.–ကိုတရုတ်ကကျွှန်တော်.ကိုခေါ်ကာ “လာ–ညီလေး–ငါတိုစိုက်ပျိူးရေးကျောင်းထက်သွားမယ်–မင်းအတွက်လေ.လာသင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လိမ်.မယ်”ဘယ်သွားမှာပါလိမ်.ပေါ.–ကျွှန်တော်တွေးနေမိတယ်ကျောင်းသူတွေသွားငမ်းမယ်ထင်တယ်”ဘာမှမကြောက်နဲ.ဟိုက်ကြီးပါတယ်လေ–ဟိုက်ကြီးဆိုအားလုံးရတယ်”ဟန်နဲ.ပန်နဲ.ြေ့ပာနေသောကိုဟိုက်ကြီးကိုကြည်.ပြီးကျွှန်တော်ပြုံးလိုက်သည်။ဒီလိုနဲ.ဧည်.သည်လေးကျွှန်တော်ကိုဟိုက်ကြီးတိုနဲ.အတူပါသွားလေသည်။စိုက်ပျိူးရေးမိန်းကလေးတွေအဆောင်ရှေ.နားကဖြတ်လာပြီးတော.ကိုဟိုက်ကြီးက”တာရာ ခဏနေ ငါတို.ကွင်းဆင်းလေ.လာမယ်နေရာကဒီနားတဝိုက်မှာကွ အခြေအနေလေ.လာလိုက်ဦးမယ်လာ ကန်တင်းမှာအရင်ထိုင်မယ်”သူကဒီကျောင်းသုံးကျောင်းလုံးရဲ၈ျင်ဆိုတော.အားလုံးသိနေတယ်လေ။ကန်တင်းမှာ နာရီဝက်လောက်ထိုင်ပြီး လာသွားမယ်–ပွိုင်.နှစ်ခုတွေ.ထားတယ်ကွ လစ်မယ်”ဆိုတော.ဘာများဘာလိမ်.ပေါ.စိတ်တော.ဝင်စားသွားသည်။
“မကြောက်နဲ. လာမှာတာလာ ရှေ.နားဆိုရောက်ပြီ ကွ”ကိုဟိုက်ကြီးရှေ.ကပြောတာကြားလိုက်ရသည်။တိမွေးကုကျောင်းသားပါနေတာမြွေကကြောက်နေသေးတယ်”တဲ. ကိုဟိုက်ကြီးကတော.တကယ်မလွယ်ဘူးဗျာ။လေးငါးဆယ်လမ်းလောက်သွားပြီးတော.ကုန်းမို.မို.လေးပေါ်ရောက်တက်လိုက်သည်။ခြုံတော်တော်ကောင်းတဲ.နေရာလေးပါ–ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီး–ကျွှန်တော်တို.အနောက်ဖက်ဆို–မိန်းကလေးတွေအဆောင်–အရှေ.ဖက်ဆိုရင်–စုံတွဲတစ်တွဲထိုင်နေသည်။ကျွှန်တော်တို.ဝင်ပြီးထိုင်နေတာ တော်ရုံမမြင်ရဘူးလေ-တကယ်နေရာကောင်း သိတယ်မှလား–ကိုဟိုက်ကြီးရဲ.ရှာဖွေတွေ.ရှိမူလေဖြစ်သည်။
“တာရာညီလေးကြည်.နေ ခဏနေကောင်းကျတော.မယ်”ကျွှန်တော်လဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ. ဗျာ.ဒီလိုဆိုတော.ချောင်းရတာဝါသနာပါတယ်လေ။ဟုတ်ပါ.ဗျာ သိပ်မကြာဘူး–ကောင်လေးကကစ်တွေပေးပြီ–ကောင်မလေးကိုဆွဲလဲလိုက်သည်။ပုဆိုးကိုဇလွဲသိမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော.ကောင်မလေးအပေါ်ကနေတက်ပြီးကစ်ပေးပြီးလက်ကနို.နီူက်တော.သည်။သူတို.အတွဲကသစ်ပင်ကြီးဘေးမှာပေါ.လူသွားလူလာတော.နည်းတယ်လို.ကျွှန်တော်ထင်ပါသည်။ကောင်မလေးကိုဆွဲထူလိုက်ပြီးနောက်ကကောင်မလေးဘောလီကလစ်တွေဖြုတ်ပေးပြီး–အကျီကိုလန်ကာကုန်းပြီးစို.နေလိုက်သည်။ထိုချိန်ကိုဟိုက်ကြီးက “ငါနဲ.သာနေရာချင်းလဲလိုက်ချင်တယ်ကွာ”ကျွှန်တော်.စိတ်ထဲကနေရယ်လိုက်သည်။ကောင်လေးနိူ.စို.လို.ဝတော. ကောင်မလေးပေါင်ကိုဆွဲကားပြီးသူပေါင်ကြားထဲခေါင်းတိုးဝင်ကာအဖုတ်ကိုနမ်းနေသည်။ပြီးတော.အတွင်းခံဘောင်းဘီတိုအဖြူလေးကိုဆွဲချွှတ်လိုက်သည်။ဘေးတိုက်အနေအထားဆိုတော. ကောင်မလေးအဖုတ်ကိုကျွှန်တော်တို.သေချာမမြင်ရဘူး–အမွေးတော.တော်တော်များတယ်ထင်တယ်–ဘေးတိုက်ကနေမည်းမည်းလေးလှမ်းမြင်နေသည်။
ကောင်လေးကတော.အားရပါးရလျှက်နေတာ ကောင်မလေးက–ကော.ကော.တက်လာသည်။ပြီးတော.ကောင်လေးခေါင်းကိုစုပ်ကိုင်လိုက် သူနိူ.ကိုပွတ်လိုက်နဲ.ဖီးတွေတက်နေလိုက်တာ–ရုပ်ကြည်.ရသလိုပဲဗျာ။သိပ်မကြာခင်ကောင်လေးကဒူးထောက်ပြီးသူလီးလေးကိုစုပ်ခိုင်းသည်။ကောင်မလေးကစုပ်ပေးနေလိုက်တာဗျာ ကြည်.လို.ကောင်းမှကောင်း–ပေါ. ကြည်.ရင်.ကျွှန်တော်.လီးလေးလဲမတ်ထောင်လာတော.သည်။
ကျွှန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တော. ကျွှန်တော်.အဖေကကျွှန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်စပ်ကျူိင်းတူံး တာချီလိတ်မြီု.သို.အလည်ခေါ်သွားလေသည်။ကျွှန်တော်.အဖက ဆယ်ဘီးကားကြီးတွေမောင်းတဲ.ဒရိုင်ဘာတယောက်ဆိုတော. ကျွှန်တော်ကိုတာချီလိတ်-ရောက်ဖူးအောင်အလည်ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ကျွှန်တော်သွားရတဲ.ခရီးကတပတ်တိတိကြာပါသည်။ကုန်တင်ပြန်စောင်.တင်ပြီး
ကျွှန်တော်ရယ်အဖေရယ်အဖေ.ကာစပါယ်ရာလေး ဦးကုလားရယ်သုံးယောက်တာချီလိတ်မှာကုန်စောင်.တော.တာချီလိတ်မှာ 5ရက်လောက်ကြာသွားသည်။ဦးကုလားနဲ.လျှာက်လည်သည်။အဖေကတော.အလုပ်တွေနဲ.မအားလို.လိုက်မပို.နိူင်ဘူးလေ။ဦးကုလားကြီါ်ကအသားတာမည်းတာဗျာ–မိန်းမတော.အသကုန်စွန် ဘာဆေးမှီဝဲလဲတော.မသိဘူး။ခုလက်ရှိအသက်50ကျော်တာတောင်မိန်းမငယ်ငယ်လေးရထားသေးတယ် ခု3ယောက်မြောက်မိန်းမယူထားတာလေဦးကုလားက-မိုက်တယ်နော်
မိန်းမသုံးယောက်လုံး တအိမ်ထဲမှာထားတာ–ကြုံတုန်းလေးဦးကုလားအကြောင်းပြောလိုက်တာပါဗျာ။ဦးကုလားနဲ.ကျွှန်တော် ပါလို.(1)လမ်းထဲကသူ.အသိဆီသွားကြသည်။ဈေးထဲလဲလျှောက်လည်ကျသည်။ကောင်မလေးတွေကတော.အရမ်းမိုက်တယ် အလန်းဇယားတွေပဲပေါ.ဗျာ။ကြည်.မိလိုက်တာနဲ.ခုဒီတယောက်လှသည်–နောက်တယောက်တွေ.လိုက်တော.အဲ.တယောက်လဲလှသွားပြန်သည်။ရင်ဖိုစရာတော.အရမ်းနေတော.သည်။
ဦးကုလား ကောင်မလေးတယောက်နဲ.အလွမ်းတွေသည်နေတာဖြစ်သည်။ဒိလူတော.အတွဲချိန်းတာရှာလို.ကားကြားမှာလာချိန်းနေတယ်။ခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းမှလား စောင်.ကြည်.တာကောင်းမယ်
“ကလေးရယ် အရမ်းလွမ်းနေတာ ကလေးကို ဦးကိုလွမ်းဘူးလား”
ဦးကုလားတို.များရုပ်ကိုတောင်အားမနာနွဲ.နေလိုက်တာ ကောင်မလေးကငယ်ငယ်တယ်–ကျွှန်တော်တို.အရွှယ်လေးပဲ အသားဖြူဖြူလေးနဲ.ချောတယ်
မဟုတ်ပါဘူးကလေးရယ် “ဆိုပြီး ကောင်မလေးကိုစနမ်းပါတော.သည်။ဒီလူကြီးမလွယ်ပါလားနော်
ကောင်မလေးအကျီ်ကိုလှန်ပြီး နိူ.သေးသေးလေးကိုစို.နေသည်။နိူ.လေးကတော်တော်သေးသည်။သူလက်မည်းကြီးနဲ.ဆုပ်ကိုင်ပြီးစို.နေလိုက်တာ ကာလာတရောင်စီထွက်နေ
သည်။ဦးကုလားကဒူးထောက်ပြီး ကောင်မလေးပေါင်နှစ်ဖက်ကိုသူပခုံးမှာတင်ကာ ကောင်မလေးအဖုတ်ကိုစတင်ရက်နေတော.သည်။
ဘာတွေမေးနေတာလဲ ရှက်ပါတယ်ဆို အအအဟ
ဖြေလေကွာ ကောင်းလားလို. ကလေးအသံလေးကြားမှ ဦးလဲလုပ်ပေးရတာအားရှိမှာပေါ.ကလေးရယ်
ရှက်ပါတယ်ဆို ဘာတွေမေးနေတာလဲ ကောင်းလို.ခံနေတာပေါ.သိဘူးလား–နောက်ထပ်မမေမးနဲ.နော်မေးရင်မခံတော.ဘူး
ဦးကုလားက ပုဆိုးကိုဇလွယ်သိမ်းပြီး သူ.လီးကိုထူတ်ကာစုပ်ခိုင်းတော.သည်။တော်တော်ရှည်တာပဲ ဦးကုလားလီးကြီးက ကုလားဘော်ကြီးတယ်ဆိုတာမှန်လေရောလား။
ကောင်မလေး ပါးစပ်အပြည်.ပဲ ကြည်.နေင်းကျွှန်တော်လဲတော်တော်လေးတင်းပြီးထောင်လာတော.သည်။
အား–နာတယ် ဦး အအ
ခဏလေးနော် ကလေး–ဖြေးဖြေးချင်းထည်.ပေးမယ် ကျပ်နေတယ် ဦးရဲ. အဟင်.အဟင်. နာတယ်
ထိုချိန်ကောင်မလေးပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီး ရူးတိုးတိုး–နော်–ဆီုပြီး ဟန်ချက်ပါပါလိုးနေတော.သည်။
အဟင်း အအအ ငြီးသံတွေလဲထွက်လို. ကျွှန်တော်လဲကြည်.ကောင်းလိုကြည်.နေမိသည်။
ကောင်မလေးကိုတဖက်လှည်.ခိုင်းပြိး အနောက်ကနေလိုးသည်။ ဟဟဟ အဟင်.အဟင်.
ဦးနာတယ် လို.–အထဲမှာတမျိူးကြီးပဲ-အအအ နာတယ် ပြီးသေးဘူးလား
ပြီးတော.မယ် ကလေးနော် အအအအအအ
ကောင်မလေးခမျာတော်တော် မျော.သွားတယ်ထင်သည်။အူးကုလားရင်ထဲမှာခွေနေတော.သည်။–ဦးကုလားပဆိုးစနဲ. ကောင်မလေးအဖုတ်ကိုသုတ်ပေးနေသည်။
ဟဟဟဟဟဟ–ခုတော.ဦးကုလားကြီးချစ်သူနဲ.ကောင်းနေတော.သည်။ကျွှန်တော်လဲအခန်းပြန်ပြီ မသိသလိုနေလိုက်တော.သည်။ညမှတွေ.မယ်ဦးကုလားရေ—— ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ဦးကုလားတယောက် ရေချိူးပြိးအပေါ်ခန်းတက်လာစဉ် ကျွှန်တော်ကမေးလိုက်သည်။
“ဘယ်မှမသွားပါဘူး သားရ အောက်မှာ အလုပ်လေးရှိလို.လုပ်နေတာပါ”ကျွှန်တော်ပြုံးလိုက်သည်
“ဟုတ်လို.လား ဦးကုလား–အလုပ်ဆိုက–ဦးနဲ.သမီးဇာတ်လမ်းမှလား ကျွှန်တော်သိတယ်နော်ဟဟဟဟ”
မှန်မှန်ြေ့ပာမပြောရင် အဖေ.နားတိုင်မှာ အဲ.ကောင်မလေးကဘယ်ကလဲ”ဦးကုလားမျက်နှာကြီးမည်းပါတယ်ဆို ရူံ.သွားတာလုံးဝ မဟူရာညမီးသွေးခဲလိုပဲဖြစ်နေတော.သည်။
မင်းအဖေတော.မပြောပါနဲ.နော် လိမ္မာတယ်ဟဲဟဲ တခါတလေပါကွာ ကောင်မလေးက ဘေးအိမ်ကလေ-နန်းမွန်းလို.ခေါ်တယ် ငါ.ချစ်သူလေးပေါ.ကွ”
ကျွှန်တော်အံသြသွားသည် “ဟင် ဒါဆို အန်တီချိူက ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ အဲ.ဦးကုလားမိန်းမလေ —
“မင်းကလဲ အဲ.တာအဲ.တာဒါလေ–ဒါကဒါလေ–မင်းငယ်ပါသေးတယ် နောက်တော.နားလည်လာမယ် ညကျရင် ကလပ်လိုက်ပို.မယ်နော် သားအဖေလဲမပြောနဲ. အန်တီချိူကိုလဲမပြောနဲ.”
ကျေးဇူးရှင်ရယ်တကယ်လိုက်ပို.မယ်နော် ငွေလေးပဲနည်းနည်းဖန်လိုက်ဟုတ်ပြီလား အိုကေ–“
“အ်ုကေ ကောင်းပြီ ခဏနေအဖေ.ဆီကနေမုန်.ဖိုးတောင်းမယ် လိုတာဦးကုလားစိုက်ဒါပဲ”
ကံကောင်းချင်တော. ညနေထမင်းစားချိန် အဖေတို.သူဌေးကြီးကရောက်လာသည်။ကျွှန်တော်ဆယ်တန်းအောင်လို. ဆိုပြီး ဘတ်ငွေ 200မုန်.ဖိုးပေးသွားသည်။
ကျွှန်တော်တို.တာချီလိတ်မှာဆိုမြန်မာကျပ်ငွေမသုံးဘူးလေ ယိုးဒယားဘတ်ငွေသုံးတယ်-တစ်ဘတ်ဆို ကျွှန်တော်တို.မြန်မာငွေငါးဆယိကျော်တယ်လေ။ပွတာပေါ.ညသွားလည်ဖို.အဖေ.စီတောင်းစရာမလိုတော.ဘူး။
ဦးကုလားက ည7း00နာရီလောက်ကျတော. “ဆရာ ကျွှန်တော် တာရာလေးကိုဂိမ်းကစားတဲ.နေရာခေါ်သွားမယ်နော် “
အေးမကြာစေနဲ. ဂိမ်းပဲကစားနော် မဟုတ်တဲ.နေရာတွေငါ.သားကိုခေါ်မသွားနဲ.မြန်မြန်ပြန်ခဲ.”
ပျော်စရာကြီး ပေါ.ဗျာ ကျွှန်တော်နဲ.ဦးကုလား ဆိုင်ကယ်နဲ.အတူထွက်လာခဲ.သည်။မီးရောင်တွေလင်းနေတဲ.ဆိုင်ရှေ.သို.ရောက်တော.ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး
လာဆင်းတော.ရောက်ပြီ ငြိမ်ငြိမ်နော် လျှောက်မလုပ်နဲ.
အထဲရောက်တော.လူတွေများလိုက်တာ–မီးရောင်စုံနဲ. တို.တိုလှလှစောတွေလဲအများကြီးထိုင်နေသည်-အင်္ဂလိပ်ကားထဲကလိုနေရာမျိူးပေါ.–ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေနဲ. ဘန်းလေးတွေကိုင်ပြိးစားပွဲထိုးလုပ်နေတဲ.ဆောတွေလှမှလှ
နိူ.တွေ.များပြူးနေတာပဲဟိဟိ–စားပွဲလွတ်တနေရာဝင်ထိုင်လိုက်တော. စားပွဲထိုးမလေးကလာပြီ–ပဲပုတ်စိလှော်တပွဲလာချသွားသည်။ဦးကုလားက ဘီယာတဘူးနဲ.-ကျွှန်တော်အတွက်.ကုတ်တဘူးမှာပေးလိုက်သည်။
ကျွှန်တော်ကတော.ရှေ.မှာလာချတဲ.ပဲပုတ်စိလေးကိုနှပ်ပြီးဝါးလိုက်တော.ဦးကုလားက”အဲ.တာစားဖို.မဟုတ်ဘူး ပစ်ဖို.ဟတာရာလေးရ-ဟိုးမှာတွေ.လားထိုင်နေတဲ.ကောင်မလေးတွေကို သားကြိုက်တဲ.ကောင်မလေးကိုပေါက်
သူတို.ထလာရင်ဘာလုပ်မှာလဲ အောက်ထပ်မှာKTVခန်းရှိတယ် မင်ူကလဲအဆင်.ကျော်ချင်နေတယ် စောင်.ကြည်.ငါလုပ်ပြမယ်
ပဲပုတ်စိလေးလှမ်းယူပြီး စပစ်လိုက်သည် တချက်–ကောင်မလေးလှမ်းကြည်.သည်–မထလာပါ
နောက်တချက်ထပ်ဖြစ်သည် မထလာပါ–ငါးချက်မြောက်မှ-သူထိုင်နေသောခုံလေးမှထလာတော.သည်။ပြီးတော.ဦးကုလားဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည် ပြီးတော.စကားတြွေေ့ပာကျသည်။
ဘယ်လိုလဲဒီညအဆင်ပြေလာ ပြေမယ်ထင်လို.ထလာတာလေ–ငါးဆယ်ဆိုတော.အဆင်ပြေတယ် KTVယူဦးမှာလား–
လာအောက်ထပ်သွားမယ် ဆိုလို. ကျွှန်တော်တို.ထလိုက်သွားတော.သည်။
ကျွှန်တော်မီးရောင်မိန်မိန် လမ်းကျဉ်းလေးကနေ-အောက်ထပ်သို.ဆင်းသါားလိုက်သည်။အောက်ထပ်တွင် မီးစုန်းတွေထွန်းထားသည်။လမ်းဧ။်ဘေးတလျှောက်တွင်အခန်းတွေတန်းစီလျှက်ရှိနေသည်။အခန်းတိုင်းလိုလို ပြည်.နေသည်။ကျွှန်တော်တို.အခန်းကနောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်သည်။လိုက်ပို.ပေးသောဝိတ်တာလေးကလိုချင်တာများမှာလို.ရပါတယ်အရည်တွေကတော.ဟို.ရေခဲသတ္တာထဲမှယူသောက်လို.ရပါတယ်ခင်ဗျာလို.ြေ့ပာတော.ဦးကုလားက ခေါက်ဆွဲကြော်နှင်.ဂဏန်းချဉ်ဆပ်မှာလိုက်တယ် “တာရာဘာဆိုမှာလဲ ဆိုကြီုက်တာဆို ငါတော.ချစ်လေးနဲ.လန်းလိုက်ဦးမယ်ဟဟဟ
ပြောရင်းဆိုရင်း သူကောင်မလေးကိုကစ်ပေးလိုက်သည်။ဆရာကုလားကသွက်တယ်ဟဟဟဟ ကျွှန်တော်ကတော.မရဲတရဲဖြစ်နေသည်။ဘေးမှာသာထိုင်ခိုင်းစေပြီလက်ကလေးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တော.သူကပြုံးပြပြိ-ကျွှန်တော်.ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော.သည်။
“ဘာလဲကြောက်နေတာ လား မကြောက်ပါနဲ.ဒို.ကမကိုက်စားပါဘူး အကြင်နာလေးပဲပေးမှာပါ။အဟင်.
ကျွှန်တော်.ရင်တွေတော်တော်ခုန်နေသည်။ဦးကုလားက–မျက်လုံးနဲ.လုပ်ပြနေသည် ကိုင်ကိုင်ဆိုတဲ.သဘောပေါ.ဗျာ –ကျွှန်တော်အားမွေးချင်သေးတယ်လေ–မလုပ်ရဲသေးဘူး ကောင်မလေးကိုဖက်တော.ဖက်လိုက်သည်။ဦးကုလားကတော. သူကောင်မလေးကိုပေါင်ပေါ်ပေးထိုင်ပြီး စိုင်းထီးဆိုင်စဆိုတော.သည်။ဘီယာသောက်လိုက် သူကောက်မလေးကိုနမ်းလိုက် နို.လေးကိုင်လိုက် နမ်းလိုက်နဲ.ဟုတ်နေတာပေ.ါဗျာ။
ကျွှန်တော်ကတော.ဘေးကကောင်မလေးကိုဖက်ထားပြီး “နမ်းလို.ရမှလား ပေးနမ်းမှလားမေးလိုက်တော.”ရတယ်လေး ခင်ဗျာလုပ်တာခံဖို.လိုက်လာတာလေ–နမ်းပေါ.ကိုင်ချင်ကိုင်လို.ရတယ်အဲ.ထက်မြင်.ချင်တယ်ဆိုနောက်ထပ်ပေးရမယ်”အော်ဟုတ်သားပဲသူကဖာသည်မပဲ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်လို.ရတာပေါ.–ဦးကုလားကတော.သူကောင်မနဲ.အဆင်ပြေသွားတယ်ထင်သည်။–စောကြီးကဦးကုလားကိုခွပြီးထိုင်ကာ-သူနိူ.ကိုပေးစို.နေသည်။ကျွှန်တော်လဲဘေးကကောင်မလေးနု.ိကိုစတင်ကိုင်လိုက်တော.သည်။အရွှယ်အစားကတော.ခပ်ငယ်ငယ်ပါပဲ သူနာမည်ကအကြင်နဲတဲ. သူပြောတာပေါ.”
သီချင်းဆိုဖို.ထက်-ကောင်မတွကိုကိုင်ချင်လို.ဒီလတာဆိုတာခုမှသဘောပေါက်တော.သည်။ဦးကုလားတို.အတွဲကတော.အချိန်ရနေပြီ–သူ.ကောင်မှဘောင်းဘီတိုပဲကျန်တော.သည်။ကျွှန်တော်အသည်းတွေယားလာချိန်ဘေးကကောင်မလေးကိုကြည်.လိုက်တော.–“လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်သုံးတယ်ပေးမှာလား –အဲ.တာဆိုကြိုက်တာလုပ်လို.ရတယ်နော် ဂျူတီမပြည်.ခင်ထိ သဘောပေါက်လား–“ကျွှန်တော်ဦးကုလားနား သွားပြီ သူပြောတာပြောလိုက်တော.ပေးလိုက်ပေါ. မင်းးကလဲ–ချမှတာချစမ်းပါကွာ
ကျွှန်တော်လဲကောင်မလေးနာ.သွားပြီး–ပေးမယ်–မင်းအဆင်ပြေသလိုလုပ်ပေးဟုတ်ပြီလား”လို.ပြောလိုက်တော.ကျွှန်တော်ပေါင်ပေါ်ကဆင်းပြီး–ကျွှန်တော်.ရှေ.မှာဆက်ဆီ အက စကတော.သည်။သီချင်းတီးလုံးတွေပြောင်းပြီ ကပြတော.သည်။သူရင်သားသေးသေးတင်လဲငယ်ငယ်လုံးလုံးလေးဦးကုလားစောကတော. နိူ.တော်တော်ကြီးတယ်–ကျွှန်တော်ကတာကြည်လ.ိုက်ကျွှန်တော်.ရှေ.မှာ တဖြောင်းဖြောင်းတွယ်နေတဲ.ဦးကုလားကိုကြည်.လိုက်နဲ. ဖီတွေလာနေတော.သည်။ကျွှန်တော်ကောင်မက အလွာတွေအားလုံးကန်ုအောင်ချွှတ်ပြီးကျွှန်တော်.ပေါင်ကြားမှာခေါင်းတိုးဝင်ကာနမ်းတော.သည်.။ကျွှန်တော်.ဇစ်ကိုဆွဲဟပြီး ကျွှန်တော်လီးကိုစတင်စုပ်ပေးတော.သည်။ပထမဆုံး အစုပ်ခံလိုက်ရတော.ကြက်သီးတွေအသီးလိုက်ထာလာသည်။နွေးထွေးသောအထိအတွေ.ကောင်းလေးရလိုက်သည်။
အား အား အား နာတယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါလာ
ရှင်လီးကြီးကအရမ်းကြီးနေလို. မခံနီူင်ဘူး နာတယ် ဟေ.လူကြီး–
ဦးကုလားပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပခုံးထမ်းပြီး လိုးနေတာ ဖုတ် ဖုတ် ဘုတ် ဘုတ် ကျီ ကျီ(ဆိုဖာမြီသံ)
အ အ အ ကျွှန်တော်ကောင်မရဲ.ငြီးညူသံလေးပေါ. တော်တော်စိုနေတာနဲ.အမျှ သူရဲ.မြင်းစီးနေတဲ.အချိန်ကာမြင်.လာသည်။ကျွှန်တော်.မျက်နှာနားမှာခုန်နေတဲ.နိူ.ကြီးနှစ်လုံးကိုစုပ်ရင်းကောင်းမလားညစ်ရင်ကောင်းမလားတွေးနေမိသည်။မထူးဘူးကိုင်မယ်ဆိုပြီး ကိုင်ကာစို.လိုက်တော.သည်။ အအအအ ကျွှန်တော် ပြီးတော.မည်.ထင်သည် –အအ အအဟင်. အဟင်.–ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်–
ဖြောင်းဖြောင်း အအအ နာလာပြီ မပြီးသေးဘူး ဒီမှာမရတော.ဘူး အအအအ အဟင်.
အအအအ လိုးလို.ကောင်းလို.ပါကွာ–မင်းအဖုတ်ကစိစိလေး ဥါ်အရမ်းကြိုက်တာပါကွာ တာရာမင်းကလဲမှန်လိုက်တာ နောက်တချီဆွဲလေ
ရတော.ဘူး တော်ပြီ ဗျာ–အအအ အေအအဟင်.ဟင်.ကျွှန်တော်ကတော.ကောင်မလေးကိုအဝတ်ပြန်ဝတ်ခိုင်းလိုက်သည်။ပြီးတော.ကျွှန်တော်.ဘေးမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီးကြည်.နေလိုက်တော.သည်
လိုးနေတာပဲ ဟဟဟ အအအအ အဟင်. အဟင်.နာနေပြီ အအအ ပြီးပြီ အအ အအ ကောင်းတယ်ကွာဆိုပြီးအဖက်ရက်မှောက်ချလိုက်တော.သည်။
အဟင်. အဟင်. ဒါဆို တို.ကပါကင်လေးစားသုံးလိုက်တာပေါ.နော် –ဒါကြောင်.အဖုတ်လေးထဲမှာနူးညံနေတာကိုး–အဟင်.ဟင်.
ကျွှန်တော်.ကိုလောင်ရယ်သလိုရယ်ပါတော.သည်။အပြန်တလမ်းလုံးလဲဥိးကုလားက–ကျွှန်တော်.ကို–နာမည်တခုပေးကာခေါ်လိုက်တော.သည်။ဆယ်မိနစ်တာရာလေးတဲ.ဗျာ။ ??? ??? ??? ::) ::)
ကျွှန်တော်နဲ.ဦးကုလား အရသာကောင်းတွေခံစားပြီး ဂိုဒါင် ပြန်ရောက်ချိန် အဖေကတော.အိပ်နေပြီ။ကျွှန်တော်.ဒူးတွေတော်တော်လေးချောင်နေတာတော.အမှန်ပါပဲဗျာ။
ဦးကုလား ဘယ်သွားမလို.လဲ အိပ်သေးဘူးလား
ငါလုပ်စရာရှိသေးတယ် တာရာလေး အိပ်နှင်.တော.လေ နောက်တစ်ရက်ဆိုငါတို.တွေပြန်ကျရတော.မှာမှလား ငါလုပ်စရာလေးတွေလုပ်ထားလိုက်ဦးမယ် လည်လို.လဲဝပြီးမှလား
ဒါဆို ကျွှန်တော်လဲမအိပ်သေးဘူးဗျာ အိပ်ချင်သေးဘူး ဦးကုလားကိုလုပ်ကူမယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီလား
ထိုအခါ ဦးကုလားပြာသလဲလဲနဲ. ဟဟ
ရပါတယ် ငါ.ဘာသာလုပ်လိုက်ပါ.မယ် မင်းလဲပင်ပန်းနေပြီလေ အိပ်လိုက်တော. လေ ဦးကုလားမကြာပါဘူးကွာ ဘယ်မှလဲမသွားဘူး ဟုတ်ပြီလား
ပြောပြီးကျွှန်တော် အခန်းထဲဝင်ကာ အဝတ်အစားလဲပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်တော.သည်။အဖေကတော.တဖက်ကုတင်မှာအိပ်ပျော်နေသည်။စောစောက အကြောင်းလေးမျက်စိထဲမြင်နေတယ်။
တွေးရတဲ.အရတာလေးလဲမဆိုးဘူးပေါ.ဗျာ။ဆယ်မိနျစ်လောက်နဲ. ပြီးသွားတဲ.ကျွှန်တော်. အဖြစ်ကိုတော.မကျေနပ်ဘူးပေါ.ဗျာ။
အသံကဆက်တိုက်ထွက်လာသည်။ကျွှန်တော်လဲအိပ်မပြောတာနဲ.တိတ်တိတ်လေး အခန်းထဲကထထွက်ပြီး တဘက်ပြတင်းဝလေးနေအောက်သို.လှမ်းကြည်.မ်သည်။ဦးကုလား-တဖက်ခြံကိုလေချွှန်ပေးနေတာဖြစ်သည်။ဒီလူမဝသေးဘူးထင်သည်။ထင်သည.်အတိုင်း တဖက်ခြံကမီးလေးလင်းလာတော.သည်။မနေ.ကတွေ.တဲ.ကောင်မလေးတော.မဟုတ်ဘူးအဒေါ်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေသည်။ဒီလူတော.ဘာတွေလုပ်ဦးမှာလဲမသိလူကသာမည်းတူးနေတာမိန်းမတိုင်းကြွေတယ်ဆိုလက်ခံသွားသည်။ဘာအဆောင်တွေဆောင်လဲတော.ကျွှန်တော်လဲမသိဘူးဗျာ..။တဖက်ခြံနဲ.ဒီဖက်ခြံသို.ဝင်လို.ရတဲ. လျှိူပေါက်လေးကနေ အဒေါ်ကြီးဒီဖက်သို.ကူးလာသည်။
ပြီးတော. ကျွှန်တော်.ကားဂိုဒေါင်ဖက်သွားလိုက်သည်။ ဟဲဟဲ ဦးကုလားကြီးဆက်ဆွဲတော.မယ်ဆိုတာသိလိုက်သည်။ကျွှန်တော်မမသိတာအအေးဖာကဒ်တွေနားသွားပြီးစောင်.နေလိုက်သည်။မနက်ဖြန်တင်မယ်.
သေချာမြင်ရသလို. စကားသံလေးတွေလဲကြားနေရသည်။ဟိဟိ အဲ.အန်တီကြီးကဟိုက်ဖက်ခြံက လူကြီးရဲ.မိန်းမဖြစ်နေသည်။သားသမိးလေးယောက်ရှိတယ် မြေးတောင်ရှိတယ် ဦးကုလားတော.တကယ်မလွယ်တဲ.လူကြီးပဲ။
မောင် ဘယ်တွေသွားနေတာလဲဒီမှာစောင်.နေတာကြာပေါ. မကိုပစ်ထားတယ်
ဘယ်မှမသွားပါဘူး မောင်.ဆရာရဲ.သားပါလို. ကစားကွင်းလိုက်ပို.ပေးနေတာ မောင်.နားအသေကပ်တာခုတောင်မနည်းပေးအိပ်ထားရတယ် မရယ် သိဘူးလား
အမလေးနော် သူတို.အသက်မှအားမနာနုရွှနေလိုက်တာ။ဦးကုလားတို.တော်ကီကလိုက်မိုက်တယ် အပျီူအအိုအားလုံးရတယ်။
‘ဟိုးဖက်ကမ်းသွားနေတယ် မောင်ရဲ. သူအလုပ်နဲ.သူပါမောင်ရယ် မနားတောင်မကပ်ဘူး အငယ်တွေနားပဲသွားတာနေမှာပေါ.
မောင်တယောက်ပဲမကိုဂရိုစိုက်တာ ဒါတောင်မောင်ကပစ်ထားတယ် ။
ပြောပြီးစတင် နမ်းလိုက်ကျတော.သည်။အဒေါ်ကြီးအသက်ရှိရင်45နဲ.50ကြားပဲဗျာ ဖင်ကြီးကြီး နည်းနည်းဝ၀
ဦးကုလားကြီးက အပေါ်မှတက်ပြီးနမ်းနေတာလက်တွေကလဲဟိုကု်င်ဒီကိုင်လုပ်နေတာများ အငြိမ်ကိုမနေဘူး–ပြီးတော.ပေါင်နှစ်ဖက်ဆွဲကားကာ အဖုတ်မည်းမည်းကြီးထဲသူခေါင်းတိုးဝင်ကာလျှက်နေတော.သည်။
မောင် လွမ်းတယ် မောင်.ရဲ.ဒီလိုလုပ်ပေးတာတွေလွမ်းနေတာ အအအအ အိမ်ကလူကြီးကဒီလောက်မစွမ်းတော.ဘူး-အအအအအ
ဦးကုလားလျှက်လို.ပြီးတော.ထပြီး သူရှေ.ပင်ကြီးကိုချွှတ်ချလိုက်တော.သည်။ထို.နောက်သူလီးကို စုပ်ခိုင်းသည်။အန်တီကြီးတော်တော်တဏာစိတ်ကြီးနေသည်ထင်တယ်စုပ်တာကြမ်းလိုက်တာ
တပွတ်ပွတ်နဲ. အငမ်းမရပဲ။မည်းပြီးရှည်နေတဲ.ဦးကုလားလီးကြီးကလဲ ကော်.ပြီးထောင်နေတာ ဟိဟိ ကျွှန်တော်ကတော.ကြည်.ရင်းစိတ်တွေထလာသည်။အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို.လုပ်နေတာကြည်.ပြီလုပ်ချင်စ်တ်တွေပေါက်လာတော.သည်။
မောင် ဘာလို.ဒီလုပ်လုပ်တာကောင်းနေတာလဲ အအ ကောင်းလိုက်တာ
ကောင်းတယ်ပေါ.လား မ–ကြီုက်လား ခံစားလို.ကောင်းလား
ကောင်းတယ်မောင်ရယ်–အဖုတ်တခုလုံးကိုကောင်းနေတာ လုပ်တော.လေ မောင် ဟင်.ဟင်.
ဦးကုလား ထပြိးထည်.လိုက်တော.သည်. ကွန်တောင်မစွပ်ဘူး
ဖုတ်ဖုတ် ဖုတ်
အအအ ကောင်းတယ် မောင် နည်းနည်းမြန်မြန်လုပ်ပေးပါလား
ဘယ်ပြောကောင်းမှလဲဦါ်ကုလားတို. နတိုးကြီးကြိုးလွတ်သွားသလို တဖြောင်းဖြောင်းလိုးတော.သည်။
တဏာစိတ်ကြီးနေတဲ. အဒေါ်ကြီးက အပေါ်ကနေတက်ထိုင်ပြီးခုန်နေတော.သည်။ဦးကုလားကအောက်ကနေနေပင်.ထိုးနေတာဟန်ချက်ကိုညီလို.ဗျာ
ဖုတ် ဖုတ် ဖုတ် ဘွတ်ဘွတ် အအအအ
ဖြစ်မှာပေါ.အန်တီရဲ.အဖုတ်ကြီးကခုလောက်ဆိုတော်တော်ပြဲနေလောက်ပြီလေး ကျပ်တာဆိုလို.ဖင်ပေါက်ပဲကျန်မှာပေါ. တဏစိတ်တွေပြည်.နေတဲ.အန်တီကြီးက ကုန်းနေတဲ.အနေထားကနေတောင်–နောက်ဖက်ကို သူဘာသာအားနဲ.ရိုတ်နေသည်။တော်တော်မာန်ထနေတဲ.ပုံပဲပေါ.ဗျာ။
အအအ အင်.အင်. အအအအ
ဦးကုလားပြီးသွားသည်ထင်သည် သူလီးကြီးကိုထုပ်ပြီး ဖင်တုံးကြီးပေါ်မှာပန်းဖုတ်လိုက်သည်။ပြီးတော.မှောက်အိပ်နေတော.သည်။
အန်တီကြီးမပြီးသေးဘူးထင်သည်။ဦးကုလားကိုပက်လက်လှန်အိပ်စေပြီ ဦးကုလားမျက်နှာပေါ်တက်ခွထိုင်ကာ–ပွတ်နေတော.သည်။သူ.အဖုတ်ကြါ်ီကိုမမမြင်ရပေမယ်.ဦးကုလားတမျက်နှာလုံးတော. အဖုတ်ဖိနေတာသေချာသည်။
ဂွင်းထုလိုက်တာ ဟိဟိ တခါပြီးသွားတော.သည်။
အပြန်ခရီးမှကျွှန်တော်မေးတော. နောက်ထပ်နှစ်ချီထပ်ဆွဲတယ်ဆိုတာသိလိုက်သည်။–မနက်လေးနာရီမှ အန်တီကြီးပြန်သွားတယ်ဆိုတာလဲသိလိုက်သည်။
ကျွှန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ဖို.2နှစ်စောင်.လိုက်ရတော.ခရီးတွေသွားဖြစ်နေသည်။အားအားယားယား 109 110
အင်းလြေ့းပငိကြီးကိုလဲမတွေ.တာကြာပြီဖြစ်သောကြောင်.သွားလည်ဖြစ်သွားသည်။ကျွှန်တော်တို.ရွှာလေးကိုရောက်တော. အဒေါ်တွေဘကြီးတွေကဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုပြီးပျော်ရွှင်နေတော.သည်။
“ကောင်လေး ငါပျင်းနေတာနဲ.အတော်ပဲ မင်းရောက်လာတော.အဖော်ရတာပေါ.ကွာ
ဒါပေါ. ကောင်လေးရ ပျော်မှပျော်
ဇယားတွေတော.မရူပ်ထားပါဘူးနော် ဦးမောင် “ကျွှန်တော်အဲ.လိုမေးလိုက်တော.မျက်နှာကြီးချူံလို.
ညစာထမင်းစားပြီ ဆွေမျိူးတွေနဲ.စကားတြွေေ့ပာရင်း-ည11ကျော်တွင် ကျွှန်တော်အိပ်စက်လိုက်တော.သည်။ဦးမောင်နဲ.အတူအိပ်စက်ရသောကြောင်.တညလုံး သြူေ့ပာတာတွေနားထောင်ရင်း
မနက်လင်း83း0လောက်တော.ကျွှန်တော်နိုးလာသည်။ဦးမောင်တို.ဘယ်သူမှမရှိတော.ချေ–အလုပ်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်မှာဘကြီးအောင်နဲ. ဒေါ်လေးစိန်ကြည်တို.သာရှီနေသည်။ကျွှန်တော်အိမ်ရှေ.ထွက်ပြီး အင်းလေးကန်ကြီးကိုငေးမောစွာကြည်.ရင်းအသက်ပြင်းပြင်းရူလိုက်ကာ
လန်းဆန်းမူကိုယူလိုက်မိသည်။ကျွှန်တော်တို.အိမ်ရဲတောင်ဖက် ကမ်းစပ်တွင်ဟိုတယ်တခုရှိသည်။ရေပေါ်ဟော်တယ်လေးတခုသာဖြစ်သည်။အင်းလေးတို.သဘာဝအတိုင်း-ရေပေါ်မှာ ခြေတံရှည်လေးနဲ.ဆောက်ထားသောဘန်ကလိုတွေသာဖြစ်သည်။သေသပ်စွာလုပ်ဆောက်ထားသောကြောင်.လှပသောအိမ်တန်းရှည်ကြီးကိုတွေ.မြင်လိုက်တော.သည်။ရေပူစမ်းလေးရှိသောကြောင်.ဧည်.များသောဟိုတယ်လေးတခုဖြစ်တယ်လို.ပြောပြသည်။
ကျွှန်တော်မျက်နှာသစ် ရေဆင်းကူးနေလိုက်သည်။ရေမကူးတာကြာပြီးဖြစ်သောကြောင်. တော်တော်ကူးလု.ိကောင်းမှကောင်းပေါ.ဗျာ
“ဗြွန်း”ဆိုပြီးကျွှန်တော်ရေအောက်တော်တော်ရောက်သွားပြီး အပေါ်သို.ပြန်တက်လာချိန်မှသိလိုက်သည်။ကျွှန်တော်.ရှေ.ပင် ကျွှတ်ကျန်ခဲ.ကိုပေါ.ဗျာ–ကျွှန်တော်နဲ.လှမ်းလှမ်းမှာမျောနေသောကျွှန်တော်.ဘောင်ဘီးကိုကူးပြီးယူရမှာလဲမဟုတ်–အပေါ်တက်ရမှာလဲမဟုတ်ကျွှန်တော်.မှာတိုင်ပတ်တော.သည်။ကျွှန်တော်ကူးနေတဲ.ယာဘက်မှာရေချိူးနေတဲ.ကောင်မလေးတွေလဲရှိနေတယ်လေဗျာ…..ဘောင်းဘီကလဲအဲ.ဖက်သို.မျောသွားနေသောကြောင်.ကူးပြီးသွားယူလို.မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေသည်။
“ဟိတ် –လာယူလေ ဘောင်းဘီ–ဟီဟီ ဟားဟား
ကျွှန်တော်.ကိုစကာရယ်နေသောမိန်းမပျိူလေးသုံးယောက် ကျွှန်တော်မှာရှက်လို.ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတော.သည်။ခဏနေဝါးလုံးလေးနဲ. သူတို.လှမ်းယူပြီး
သူတို.ကတဟားဟားတပြုံးပြုံးနဲ.ကျန်နေခဲ.မှာသေချာသည်။ကျွှန်တော်အခန်းထဲမှာအဝတ်လဲပြီးအပြင်တောင်မထွက်ရဲသေးဘူးနေနေလိုက်သည်။မသိမတာ–မနက်စာလေးဝင်စားပြီသွားလည်ဖို.ဘယ်သူမှမရှိတော. အခန်းမှာဂီတာတီးပြီး နေနေလိုက်သည်။
“ဟီးဟီး–ဟဟဟဟ သနားပါတယိ နော် သူတော်တော်ရှက်သွားမှာ —
အမယ် နင်.ကသနားနေတာ ဘာလဲကြည်.ချင်လို.လား သူဟာလေးကို
ကျွှန်တော်.အကြောင်းပြောနေတာသေချာသည်။အင်းသားသံဝဲဝဲလေးတွေ–ပျဉ်ထောင်အိမ်ဆိုတော. ပျဥိကျဲကျဲလေးတွေနဲ.ရိုတ်ထားတဲ.–ကြားကနေလှမ်းချောင်းလိုက်တော.–စောစောရေချိူးနေတဲ.သုံးယောက်ထဲကနှစ်ယောက် အဝတ်လဲနေတာတွေ.လိုက်ရသည်။ကျွှန်တော်.ဘေးအိမ်ကပဲ
ပြတင်းပေါက်ဖွင်.ပြီးသူတို.လုံချည်ရင်ခြားဝတ်ထားသည်။အင်လေးကအိမ်တွေကပြတင်းပေါက်နဲ.ကြမ်ြး့ပင်တပေလောက်တာမြင်.သောပြတင်းပေါက်ဆိုတော.သူတို.ထိုင်နေတာတွေ.မြင်လေသည်။တယောက်အသားဖြူဖြူ-လေးနဲ.ချောတဲ.အစားထဲမှာပါသည်။နောက်တယောက်ကတော.အသားညိုသည် သွားခေါသည်။သို.သော်အဲ.တယောက်အိုးနဲ. နို.ကတော.တော်တော်ကြီးတဲ.ပုံဖြစ်သည်။အသားဖြူဖြူနဲ.တယောက်တော.ပိန်သောကြောင်.သေးသွယ်သည်။
သနပ်ခါးလိမ်းပြီး အသားဖြူဖြူနဲ.တယောက် အြ့ပင်ထထွက်သွားလိုက်သညိ။သွားခေါခေါနဲ.တယောက်က–သနပ်ခါးလိမ်းပြီး ကျန်ခဲ.သည်။ဘောလီဝတ်မို.သူရင်ရှားကြီးကိုချွှတ်ချလိုက်သည်။ကျွှန်တော်ထင်သည်.အတိုင်းပဲသူနိူ.တော်တော်လေးထွားတာမြင်လိုက်ရသည်။နိူ.သီးခေါင်တွေကတော.ညိုမည်းနေသည်။ကလေးအမေလားမသိ။ဘောလီဝတ်ပြီးအဝတ်လဲလိုက်သည်။ထို.နောက်အောက်ခံဘောင်းဘီတိုအနိရောင်ကိုဝတ်ပြီးအပေါ်မဆွဲတင်လိုက်ချိန် သူပေါင်တံညိုညိုရော ဖင်တုံးကြီးပါမြင်လိုက်ရသည်။အင်းလေးခရီးရောက်ခါစ–ရင်လိုက်ဖိုမိသောနေ.လေးပေါ.ဗျာ။
ကျွှန်တော်တို. အင်းလေးမှာဧည်.သည်လာတယ်ဆိုရင် ညဖက်ကာလသားတွေ–ကာလသမီးတွေအိမ်လာလည်ကျတဲ.ဓလေ.လေးရှိကျသည်။တနေကုန်ခြံထဲသွားတဲ.လူကသွား
ဈေူးရောင်းသူကရောင်း.ငါးဖမ်းသူကဖမ်းနဲ. အိမ်တွေကမှာလူမရှိတပ်ကြဘူး။ညနေအလုပ်ပြီးချိန်မှညနေစာစားပြီအိမ်တွေလိုက်လည်ကျသည်။တီဗွီကြည်.ရသည်။ခုလဲကျွှန်တော်တို.အိမ်မှာလူတော်တော်များများလာလည်ကျသည်။ဘေးအနီးအနားက မိန်းကလေးယောက်ျားလေး15ယောက်လောက်တေည.ရှိသည်။အဲ.ထဲမှာမနက်ကကျွှန်တော်နဲ.ရေချိူးရင်းတွေ.တဲ. မချောနှစ်ယောက်လဲပါသည်။ကျွှန်တော်မှာရှက်သဖြင်.သူတို.နဲ.မှက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲလို.ဦးမောင်ဘေးမှာထိုင်နေလိုက်သည်။သူတို.ကအင်းသားစကားသံတွေနဲ.ပြောလိုက်ရယ်လိုက်လုပ်နေကျသည်။10း00ထိုးလောက်တော.ထပြန်သွားကြသည်။ကျွှန်တော်စကားတွေဘာတွေပြောရင်းအိပ်ချင်သဖြင်.အခန်းမှာဝင်လိုက်တော.သည်။
ရာသီဥတုပူသောကြောင်. အိပ်မပျော်ဖြစ်နေချိန်–ခေါင်းရင်းဖက်ကနေရေချိူးသံကြားနေသည်။တယောက်တယောက်ရေချိူးနေတာသေချာသည်။ကျွှန်တော်လဲကျဲနေသောနံရံကနေလှမ်းကြည်.လိုက်တော. မီးခွက်လေးဘေးကချပြီး အိမ်လှေခါးကနေရေခပ်ချီူးနေသော မနက်ကညိုညိုနဲ.အစ်မကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ.လိုက်သည်။ညအမှောင်ကြောင်.သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရပေ။ဒါပေမယ်.ကျွှန်တော်လဲအခန်းထဲကမီးခွက်ကိုမူတ်ပြီးကြည်.နေလိုက်သည်။ရေဝတ်လဲပြီးအပေါ်သို.တက်သွားသည်။ကျွှန်တော်မနက်ကအခန်းကိုကြည်.လိုက်တော.တံခါးဖွင်.ထားသည်။မီးခွက်လေးဘေးချပြီးခေါင်းတွေသုတ်နေတာကိုလှမ်းတွေ.လိုက်သည်။အဲမမက ထမီရင်လျှားလေးနဲ.တမင်ခွေထိုင်လိုက်သည်။ထိုနောက်သနပ်ခါးသွေးနေသည်ထင်သည်ကုန်းကုန်းနဲ.ဆိုတော.–ကျွှန်တော်တွေးတာမှန်သွားသည်။မီးခွက်အလင်းရောင်ဝါဝါဟတ်မူနဲ.အတူ
ညဖက်မိန်းကလေးတယောက်အလှကိုခံစားမိတော.ရင်လိုက်ဖိုမိသည်။အသည်းပြည်.ပြညိ.တုတ်တုတ်ဝဝဆိုတော–သူသနပ်ခါးတွေးလို.လူပ်နေတာလက်မောင်းတွေရော–ရင်တွေပါလူပ်ခါနေတော.သည်။နိူ.လူပ်တာများသွားလို.ထင်သည် ရင်လျှားကြီးပြေကျသွားတောသည်။-ထိုချိန် နိူ.ကြီးကြီးနှစ်လုံးပျီူးနေအောင်ထွက်လာတော.သည်။
လက်တွေ မျက်နှာတွေ သနပ်ခါးလူးပြီ–ဘလော.အကျီလေးချွှတ်ချလိုက်တော.သည်။ပြီးသူထွက်သွားသည်။
အိပ်လို.မပျော်ဘူး ဦးမောင်ရ ပူလို.ထင်တယ်ဗျာ
အသားဖြူဖြူလေးကမယ်မီးတဲ.–အသားညိုညိုလေးနဲ.ကတော. သူအကိုမိန်းမပေါ. မုဆိုးမပေါ.ကွာ
အင် လှတော.လှတယ်နော် ဦးမောင်
လှတာမှတော်တော်လှတယ် ငါချောင်းနေတာလေ ဟဟဟဟရလို.ကတော.ယူမှာကောင်လေးရ။
ထုံစံအတိုင်း ကျွှန်တော်နေမြင်.မှအိပ်ရာနိူးလာသည်။ရေမိုးချိူးအစားစားပြီး ဒေါ်ကြီးနဲ.ခြံထဲလိုက်သွားသည်။ခရမ်းချဉ်တွေစိုက်တဲ.ခြံလေးထဲမှာဟိုလုပ်ဒီလုပ်ဟိုသွားဒီသွားနဲ.
နေ.လည်ချိန်ကျွှန်တော် အိမ်ပြန်လာခဲ.သည်။အိမ်တံခါးကပွင်.နေသည်။ဘကြီးနေသည်ထင်သည်။ကျွှန်တော်လဲဒီတိုင်းလေးအိမ်ထဲသို.ဝင်လာလိုက်သညိ။ဖိနပ်က-ဦးမောင်ဖိနပ် နောက်တရံကမိန်းမစီးဖီနပ်–
သေချာပြီ လူပိုကြီးခုိုးစားနေတာဖြစ်မည်ဆိုတာသိလိုက်သည်။ကျွှန်တော်ခြေသံဖွဖွလေးလှမ်းပြီး–ကြည်.လိုက်သည်။ကျွှန်တော်တို.အခန်းတံခါးပိတ်ထားသည်။ဒီတော.ကျွှန်တော်က ဘေးကဦးလတ်တို.အခန်းဖက်သို.သင်လိုက်သည်။နေ.လည်ဆိုအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတတ်တာကိုဦးမောင်တို.အသုံးချတာတော်ပါပေ.ဦးမောင်ရေ–စိတ်ထဲကနေပြောနေလိုက်သည်။ကျွှန်တော်တို.အခန်းတွေကာထားတာထရံကာဆိုတော.ချောင်းရတာလွယ်ကူသည်။ကျွှန်တော်အပေါက်ရှိမယ်.နေရာကိုတိတ်တိတ်လေးရှာလိုက်တော.–တွေ.ပြိ–အပေါက်လေးကအနေတော်ပဲဆိုတော.–ငုတ်တုပ်လေးထိုင်ကာကြည်.လိုက်တော.သည်။
ဦးမောင်ဟာကြီးကကြီးတာကိုနာတာပေါ. အ အ–
ဖြည်းဖြည်းဦးမောင် အထဲမှာအောင်.တယ် –ဟိုတခါကလဲ သေအောင်နာတယ် အအအဟင်.
ကြီးကြီးတို.အိမ်ကနေညနေစာစားပြီးမှကျွှန်တော်ဘကြီးတို.အိမ်ပြန်လာလိုက်တော.သည်။ည9း00ကျော်မှကျွှန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော. ဧည်.သည်တွေကတော.ရှိနေသေးသည်။ကျွှန်တော်လဲစကားဘာလေးဝင်ပြောပြီးအိပ်ခန်းထဲဝင်လိုက်တော.သည်။ဦးမောင်ကြီးတယောက်နေ.လည်ကခိုးစားလို.ဝလို.ထင်တယ်အိပ်နေတာများတော်တော်ပင်ပန်းနေတဲ.ပုံနဲ.အိပ်နေသည်။ကျွှန်တော်သူခြင်ထောင်လှန်လိုက်ပြီး သူစောင်ကိုဆွဲလှန်လိုက်တာ–ဟဟ ပ်ုဆိုးကခါးပေါ်ရောက်နေတာဖင်ပြောင်ကြီးဖြစ်သွားတော.သည်။
မအိပ်တာ ဒီနေ.ဘာလုပ်လို.ပင်ပန်းတာလဲဆိုတာကျွှန်တော်သိတယ် ဟဟ
လိမ်ချင်လဲ ပိရိအောင်လိမ်နော်ဦးမောင် မှန်မှန်ပြောနော် နေ.လည်ကအိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ကျွှန်တော်သိတယ်နော်”
ငါပြန်လာတုန်းကမရှိပါဘူးကွ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး
သုံးချီတောင်ဟုတ်လား ဟိုကသေရောပေါ.ကွ ဦးလီးကြီးကအကြီးကြီးနဲ.
ဘယ်လိုငြိသွားတာလဲ ဦးမောင်သွက်လှချည်လား မိန်းမမယူပဲဒီလိုပဲခိုးစားနေတယ်ပေါ.ဟုတ်လား
မင်းကလဲ သူစန်းနဲ.သူပေါ.ကွ သူနဲ.ငြိသွားတာထူးဆန်းတယ်ကွ တာရာလေးရ ဦးမောင်ပြောပြမယ်နော်
အဲ.မှာအပေါ်စဉ်လေးပေါ်အိုးမတင်တာကွာ ငါ.ပုဆိုးကြီးကျွှတ်ကျသွားတာ မင်းသိတဲ.အတိုင်း ငါဘောင်းဘီတိုမဝတ်တာ
သူကငါ.ရှေ.မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ သွားပါလေရော-အိုးကလွတ်ချလို.မရ ပဆိုးကမတင်လို.မရ သူမျက်နှာနဲ.ကပ်ကပ်လေးငါ.လီးကြီးအားလုံးသူမြင်သွားတာပေါ.
သူအိုးတွေကလဲမတွေ.ဘူးလားတင်းပြိးကားထွက်နေတာ ရင်ခုန်စရာကောင်းမှကောင်းလေကွာဒီလိုနဲ.နောက်နေ. ငါသူတို.အိမ်မှာဆန်အိပ်သွားယူတာ
သူတယောက်ပဲအိမ်မှာရှိတာ ငါလဲအိမ်ပေါ်တက်သွားတော.သူကရှက်နေတယ်ပေါ.ကွာ ငါလဲအားနာနာနဲ. ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးဆန်အိပ်မပြီးဆင်းလာခဲ.တယ်–
ဦးမောင် သဘောတွေကျနေတယ်ပေါ.အဲ.တာတွေကို ဟုတ်တယ် မှလား
ဒီလိုကွ ငါတို.ဘုရားဘွဲသွားကျတာလေ သွားတာတော.အတူတူသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဘာသာကိုယ်.ဘာသာသွားတာကွ
ငါလဲပွဲလဲရင်းသူတို.နဲ.ဆုံတာပေါ.ကွ ပျင်းလို. ပြန်ချင်နေတာပေါ.ကွာ သူကလဲပြန်ချင်နေတာဆိုတော. အတူတူနှစ်ယောက်သားပြန်လာဖြစ်တယ်
ဒီလိုနဲ.ငါတို.နှစ်ယောက်လှေနဲ.အတူတူပြန်လာတာ အိမ်ရောက်တော. ကံတရားကငါ.ဖက်ပါတာထင်တယ် သူလှေကနေအိမ်ပေါ်လှမ်းတက်တာလျှော်ပြီးရေထဲကျသွားတာကွ
မဟုတ်ပါဘူး မင်းကလဲ အကောင်းပြောနေတာ
ဆက်ပြော ဆက်ပြော နားထောင်လို.ကောင်းနေပြီဗျာ.
အင် ငါလဲအမြန်ဆွဲတင်လိုက်တာပေါ.ကွာ လှေခါးပေါ်မတင်လိုက်တော. ငါ.ရင်ထဲသူရောက်လာတာပေါ.ရေစိုနေတဲ.ကိုယ်လုံးလေးကအိပြီးအလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတော.ပဲ-
ဖြစ်ချင်တော. ငါလီးကြီးကလဲထောင်လာပြီးသူအဖုတ်ကြီးကိုထောက်မိပါလေရော သူက အို နောက်ဆုတ်ပါ လို.ြေ့ာတယ်
ငါလဲနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ် ပြန်တော. လို.ပြောတယ်
ရှင် ကျွှန်မကိုစိတ်ဝင်စားနေတာမှလားတဲ. ဒဲ.ကြီးမေးလာပေါ.ကွာ
ငါ–က–အင်မလုပ်အဲမလုပ်ဘာဖြေရမှန်းမသိတော. သူကငါ.လက်ကိုဆွဲယူပြိး သူကတင်ပေါ်ခေါ်ထိုင်လိုက်ပြီး
ငါလဲမထူးဘူးဆိုပြီး ဟုတ်တယ် စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်ကွာ ဆိုပြိးဖက်နမ်းလိုက်တော.တာပဲ
ချက်ခြင်းပဲငါ.ကိုတွန်းလှဲပြီးအပေါ်ကနေ နမ်းတော.တာပဲ ကွ
ပြီးတော. ငါပုဆိုးကိုဆွဲချွှတ်ပြီး ငါ.လီးကိုစုပ်တော.တာပဲ ငါကောင်ရေ
ရှင်လီးကြီးကတော်တော်ကြီးတာပဲတဲ. ကျွှန်မကြိုက်တယ် ကျွှန်မယောက်ျားဟာထက်ကြီးတယ် ဆိုပြီးစုပ်နေတော.တာပဲ
ငါ.ထိပ်ပိုင်းကိုလျှာနဲ.ကစားပြိး လက်ကငါ.ဥနှစ်လုံးကိုဆော.နေတာကောင်းမှကောင်း ငါလဲဖီးအရမ်းတက်လာတော. သူကိုဆွဲလဲပေါင်ဖြဲကားပြီး
သူအဖုတ်လေးကိုမူတ်တာပေါ.ကွ ကောင်းမှကောင်းပဲစိစိလေး ပဲ
သူငုတ်စိလေးလျှာနဲ.ကလော်လိုက် နူတ်ခမ်းသားတွေကိုစိုပ်ဆွဲလိုက်လဲ လုပ်ပေးနေတာသူက
အရမ်းကောင်းတာပဲ ဦးမောင် အရင်ကဒီလိုမခံစားခဲ.ရဘူးသိလား လို.ပြောတယ်ကွ
တော်တော်လေးစိုချွှဲနေတော. ငါလဲငါ.လီးကြီးကိုစထည်.လိုက်တာပေါ. သူအား နာတယ် ဖြည်းဖြည်းထည်.
ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော. အဆုံးထိဝင်သွားတယ် -သူကတော.အောက်နေကော.ကော.ပေးနေတာ
ဟိဟိဟိခဏလေးပါပဲ ဦးမောင် နာရီဝက်လောက်ပဲ ဦးမောင်အေါ်ကနေဆွဲနေတာလေ